पुल डाउन स्प्रेयरको साथ किचन नलहरू, 304०XNUMX स्टेनलेस स्टील उच्च चाप एकल ह्याण्डल ब्रश निकेल किचन सिंक नल डेक प्लेटको साथ
घर / भान्साको नल / किचनको नलहरू तान्नुहोस् / पुल डाउन स्प्रेयरको साथ किचन नलहरू, 304०XNUMX स्टेनलेस स्टील उच्च चाप एकल ह्याण्डल ब्रश निकेल किचन सिंक नल डेक प्लेटको साथ
रेटेड 5.005बाहिर आधारित4मूल्यांकन ग्राहक
304 स्टेनलेस स्टील रसोईको नल
प्रीमियम SUS स्टेनलेस स्टीलको बनेको, आधुनिक पुल-आउट किन्चको नल तपाईको भान्छालाई अपडेट बनाउनका लागि उत्तम विकल्प हो।
२ पानी मोडहरू ream स्ट्रिम / स्प्रे
सफाईको लागि शक्तिशाली स्प्रे मोड र भाँडा भर्नको लागि स्थिर स्ट्रिम मोड, जसले खाना पकाउन अझ सक्षम बनाउँछ।
सिरेमिक कार्ट्रिज पानी सुरक्षा र लामो आयु सुनिश्चित गर्न 500,000 चक्र परीक्षण पारित गरिएको छ।
तपाईंको किचेन लाइफ अपग्रेड गर्नुहोस् - उच्च चापको किचनको सिink्क नलले 360 1.5० डिग्री घुमाउँछ र १. m मिटर पीएक्स पुल-आउट नलीको सुविधा दिन्छ, जसले धुलाई क्षेत्र विस्तार गर्दछ र खाना पकाउन अझ बढी सक्षम बनाउँदछ। एकीकृत एकल ह्यान्डल किचन नल पानी प्रवाह र तापमान समायोजित गर्न सजिलो छ।
तपाईंको स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुहोस् - 304०XNUMX स्टेनलेस स्टीलको शरीरको घमण्ड गर्दै, यस पर्यावरणमैत्री पुल आउट किचेनको नलले पानी सुरक्षा सुनिश्चित गर्दछ र तपाईंको स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिन्छ। ब्रश निकल सतह रस्ट, फिंगरप्रिन्ट, क्षय, र सफा, सुरुचिपूर्ण हेर्नका लागि कपडाले सफा गर्न सजिलोसँग प्रतिरोध गर्दछ।
२ मोड स्प्रे हेड - पज / स्ट्रिम। पानी भर्नको लागि स्थिर स्ट्रिम मोड, कडा सफाई र रिन्सिंगको लागि शक्तिशाली स्प्रे। Built०% सम्म पानी बचाउँदा बिल्ट-इन एबीएस एरेटरले एक सहज पानी प्रवाह प्रदान गर्दछ।
स्थापना गर्न सजिलो – वाणिज्यिक भान्साको नल विस्तृत स्थापना निर्देशनहरू सहित आउँदछ र तपाईंलाई आफैंले २० मिनेट भित्र प्लम्बर बिना नै स्थापना गर्न मद्दत गर्दछ। हामी 20 इन्च डेक प्लेट पनि आपूर्ति गर्छौं (१ वा hole होल सिink्कमा)।
विश्वस्त--वर्ष ग्यारेन्टी - बक्स र मोटो स्पन्जको साथ राम्रो प्याकेज। यहाँ WOWOW मा, हामी हाम्रो भान्छाको नलको गुणस्तरमा गर्व गर्दछौं किनकी स्थापना सजिलो छ, पार्ट्सहरू गुणस्तरीय सामग्रीबाट बनेका छन्, र प्रत्येक अर्डर 90 ०-दिनको रिटर्न नीतिको साथ आउँदछ।
SKU: EVE-0071-1 विभाग: भान्साको नल, किचनको नलहरू तान्नुहोस् टैग: पुल डाउन स्प्रेयरको साथ भान्छाको नल, भान्सा सिink्क नल, एकल ह्यान्डल किचनको नल, स्टेनलेस स्टील रसोईको नल
यो स्प्रेयर र डेक प्लेटको साथ पुल आउटको साथ एउटा भान्साको सिink्क नल हो। उचित मूल्यको साथ एक राम्रो उत्पाद। सबैभन्दा सजीलो नल मैले स्थापना गरेको छु!
B *** ई2021 / 03 / 01
पैसा मूल्य! आधुनिक उत्पादन सरल स्थापना र सरल निर्देशनहरूको साथ आउँदछ। यसले सबै आवश्यक भागहरू समावेश गर्दछ र सजिलै सँगै स्थिर गर्न सकिन्छ। पुल-आउट किचनको नल एकदम सुन्दर र रमणीय देखिन्छ, र त्यहाँ दुई स्प्रे विकल्पहरू छन्। स्प्रे नोबमा २ बटनहरू सजिलैसँग तिनीहरू बीच स्विच गर्न सक्दछ। एकल तातो र चिसो ह्यान्डल बाँया र दायाँ स्वतन्त्र रूपमा सार्न सक्छ। समग्र पॉलिश महसुस नरम र सफा गर्न को लागी सजीलो छ। यस उत्पादनको मेरो व्यक्तिगत दृष्टिकोण यो हो कि यो मूल्य र सौन्दर्यको साथ राम्रो उत्पादन हो।
जे *** ई2021 / 04 / 17
स्थापना गर्न सजिलो र काम गर्नुपर्दछ। यसको शैली चित्रको रूपमा छ। अन्य ब्रान्डको तुलनामा, यो उत्पादन सस्तो र अधिक उपयोगी छ।
एच *** ए2021-04-25
मेरो भान्छामा पूरै फिट